Android အတွက်အကောင်းဆုံး Office Suite လေးခု Androidsis
Android အတွက်အကောင်းဆုံးရုံးသုံး application များ
Android ဟာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသိသိသာသာပြောင်းလဲလာတဲ့ operating system တစ်ခုပါ။ သုံးစွဲသူများအားလုပ်ဆောင်မှုများပိုမိုများပြားလာပြီးစမတ်ဖုန်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ တကယ်တော့၊ အရင်တုန်းကငါတို့ဖုန်းတွေမှာလုပ်နိုင်တဲ့ကွန်ပျူတာ (သို့) တက်ဘလက်အတွက်ကြိုတင်မှာယူထားသည့်လုပ်ဆောင်ချက်အချို့ရှိသည်။ ကတည်းက ရုံးအလိုအလျောက်ကိရိယာများသုံးရန်ပုံများတည်းဖြတ်ပါ.
ပမာဏ Android အတွက် Office application များသိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ရွေးချယ်မှုကြီးထွားလာပြီးလျှောက်လွှာများပိုကောင်းလာပြီ။ ထို့ကြောင့်၊ အောက်တွင်သင့်အား Android အတွက်အကောင်းဆုံးရုံးလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများကိုသင့်အားထားရှိပါသည်။
ဒီကိရိယာအားလုံးကို Play Store ကနေတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ရတယ်။ ထို့ကြောင့်သင်သည် APK သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအရာအားလုံးကိုအသုံးမပြုရပါ။ ထို့အပြင်၎င်းတို့အားလုံးသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပြီးလိုအပ်သောရုံးအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
1 WPS ရုံး
3 Microsoft က Office ကို
4 Google ရုံးသုံးအစုံ
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ Android အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်တောင်မှအကောင်းဆုံး။ ဒီရုံး suite ကိုပုံမှန်အားဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည့်ဖုန်းများရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်သင်အများစုသည်အကျွမ်းတဝင်ရှိနိုင်သည်။ ပိုင်ဆိုင်သည် ၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုအလွန်အဆင်ပြေစေသည်အလွန်ကြီးစွာသော interface ကို။ ထို့ကြောင့်အသုံးပြုသူအားလုံးသည်၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုများစွာကိုခံစားနိုင်သည်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားရုံးသုံးခန်း၏ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပေးသည် Android မှာလည်းအဆင်ပြေပါတယ်။ ပြproblemsနာမရှိဘူး၊ ဒါကြောင့်ဒီ suite နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာအရမ်းကိုသက်သောင့်သက်သာရှိစေတယ်။ ဒါ့အပြင် ၎င်းသည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီး cloud နှင့်ပေါင်းစပ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဖုန်းရှိအခြားအပလီကေးရှင်းများနှင့်သဟဇာတဖြစ်စေသည်။ အကောင်းဆုံးက လျှောက်လွှာတစ်ခုတည်းတွင်ဤအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည်.
WPS Office-PDF၊ Word၊ Excel၊ PPT
ရေးသားသူ: WPS SOFTWARE PTE ။ LTD ။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ Microsoft Office အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သင်ဟာ Office office suite ကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ဒါကသင့် Android device မှာ install လုပ်ဖို့စဉ်းစားသင့်တဲ့နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးက အရာအားလုံးတစ်ခုတည်းလျှောက်လွှာအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ လျှောက်လွှာများစွာနှင့်ဖုန်းတွင်နေရာမယူပါ။ သင်တို့သည်လည်းရန်ရှိသည် စာရွက်စာတမ်းအမျိုးမျိုးနှင့်၎င်း၏ပေါင်းစည်းမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ.
ဒါဟာperfectlyုံနှင့်အလုပ်ဖြစ်တယ် interface ကိုရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါတယ်။ အရာရာတိုင်းဟာအရမ်းကိုသိသာထင်ရှားပြီးချက်ချင်းဆိုသလိုကျွန်တော်တို့ဟာပရိုဂရမ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့သလိုပြောင်းရွှေ့နိုင်ပါတယ် The ဒီ application ကို Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်။ ကျနော်တို့ကကြော်ငြာထဲမှာရှာတွေ့ပေမယ့်ကံကောင်းတာကအရမ်းနှောင့်အယှက်မဟုတ်ပါဘူး။
OfficeSuite- စကားလုံး၊ စာရွက်များ၊ PDF
မိုက်ခရိုဆော့ဖ်သည် Android အတွက် application များကိုအချိန်အတော်ကြာစတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အနက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရုံးသုံး suite မြတ်နိုးမှုနှင့်သန်းနှင့်ချီသောသုံးစွဲသူများသည်သူတို့၏ကွန်ပြူတာများတွင်ရှိသည်ကိုလည်းတွေ့ရသည်။ အကယ်လို့ Word, Excel နဲ့ Office အစီအစဉ်တွေကိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင်၊ ၎င်းတို့ကိုသင်၏ Android ဖုန်းတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးကတော့ဒီဇိုင်းကတော့အတူတူပဲ။ ဒါကြောင့်ဒီ application တွေကိုသုံးရတာအရမ်းလွယ်ကူတယ်။
အဓိကပြproblemနာကတော့မင်းလုပ်ရမယ် apps အားလုံးကိုသီးခြားစီ download လုပ်ပါ။ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုလေးလံစေသည့်အရာ။ Android အတွက်အစုံလိုက်သုံးလို့ရတယ်။ ၎င်းတို့အားလုံးကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့တွင်ကြော်ငြာနှင့် ၀ ယ်ယူမှုများလည်းမရှိပါ။ လျှောက်လွှာတင်ရန်လင့်များအားဤနေရာတွင်ထားရှိပါသည်။
Microsoft Word- စာရွက်စာတမ်းများကို တည်းဖြတ်ပါ။
Microsoft Excel- စာရင်းဇယားများ
OneNote - အကြံပြုချက်များကိုသိမ်းဆည်းပြီးမှတ်စုများကိုစုစည်းပါ
Android မှာသုံးလို့ရမယ့်ဂူဂဲလ်မှာကိုယ်ပိုင်ရုံးသုံးခန်းရှိတယ်။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအရေးအပါဆုံးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်အသုံးချပရိုဂရမ်များစွာကိုကမ်းလှမ်းသည်။ စာရွက်စာတမ်းများကိုတည်းဖြတ်ခြင်းမှ၊ Excel လိုတင်ဆက်မှုများ၊ တင်ပြချက်များ (သို့) PDF အယ်ဒီတာ / စာဖတ်သူတွေအထိ။ သောကြောင့် ငါတို့ရှိသမျှသည်လိုအပ်သောကိရိယာများရှိသည် အလုပ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်။
အကောင်းဆုံးဟာသံသယမရှိဘဲသင့်ရဲ့ဖြစ်ပါတယ် Android ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်ခြင်း အားလုံး applications များကျွန်တော်တို့ကိုပူဇော်ကြောင်း။ သူတို့ကထက်ပိုမိုကြောင်းသဘောတူလိုက်နာရန်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါတို့ရန်ရှိသည် သူတို့အားလုံးကိုသီးခြားစီ download လုပ်ပါ။ သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးကြော်ငြာတွင် ၀ ယ်ယူမှုများလည်းမရှိပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Android အတွက်အကောင်းဆုံးရုံးသုံး application များ